Efitra Fandraisam-Bahiny Faharoa: Zoron’ny Tanora Ao Amin’ny Tranomboky Zavidovići · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2014 2:58 GMT
Any Bosnia sy Herzegovinia, maro ny mpianatra avy any ambanivohitra no mandeha bus isan'andro hianatra any ambonivohitra. Midika ho fiandrasana bus ora maromaro tsy manao na inona na inona izany matetika ho an'ny tanora mpianatra.
Tsapan'ireo mpiandraikitra ny Tranombokim-Bahoaka Zavidovići, izay miorina indrindra eo akaikin'ny fiandrasana bus, izany fahitana ny mpianatra lany andro miandry bus isan'andro tsy manao na inona na inona izany.
Izany fahatsapana izany no nitarika ho amin'ny fananganana tahala iray natokana ho an'ireo ankizy ireo, mamaha ny olan'ny ora lany amin'ny fiandrasana bus. Ho fanintonana ny tanora sy hampianarana talenta vaovao, dia nametraka ivon-toerana multimedia ahitana fandaharana vaovao izay misokatra mialoha sy aorian'ny fotoam-pianarana, ary ahazoana mizatra solosaina, aterineto ary fahaizana teknolojia – izay tohanan'ny ONG EIFL. Manana hetsika isan-karazany ihany koa ry zareo hampiroso lalindalina ny mpianatra sy hampiroborobo ny tetikasa, tahaka ny fifaninan-tsary.
Azonao atao ny manjohy ny tranomboky ao amin'ny pejy Facebook-ny.